Sorona Masina ny 11/12/2020 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 11/12/2020
Ry Andriamanitra Andriananahary ô, mba tahio ny vahoakanao harisika miandry ny hiavian’ny Zanakao Lahitokana, ka araka ny nampianarin’Izy Mpamonjy anay, dia enga anie ho vonona izahay hidodododo hitsena Azy mitondra ny jironay mirehitra tsara.
Iz. 48, 17-19
Enga anie ka hihaino ny teniko ianao.
Izao no lazain’ny Tompo Mpanavotra anao, Ilay Masin’i Israely: Izaho Tompo, Andriamanitrao, mampianatra anao, mba hahitanao soa; mitarika anao amin’ny lalana tokony halehanao Aho. Enga anie ka hihaino ny teniko ianao, dia ho tahaka ny onjan-dranomasina ny fahamarinanao: ho tahaka ny fasika ny taranakao; ho tahaka ny vovo-pasika ny haloaky ny kibonao; tsy hesorina ny anarany, na hovonoina eo anatrehako.
Fiv.: Izay manaraka Ahy, hanana ny fiainana.
Endrey ny hasambaran’ny olona tsy manaraka ny hevitry ny ratsy fanahy, tsy mandeha amin’ny lalan’ny mpanota, na monina amin’ny fonenan’ny mpaneso; fa ny lalan’ny Tompo no sitrany; ny Lalàny no saininy andro aman’alina.
Tsy mba toy izany ny ratsy fanahy; fa mova tsy akofa paohin-drivotra! Fa ny lalan’ny olo-marina fantatry ny Tompo, ny lalan’ny mpanota kosa, mamery!
Avia, ry Tompo, vangio am-piadanana izahay, mba hifalianay amin’ny fo lavorary.
Tsy nohenoin’izy ireo na i Joany na ny Zanak’Olona.
Tamin’izany andro izany i Jesoa niteny tamin’ny vahoaka nanao hoe: “Amin’inona no hanoharako itý taranaka itý? Amin’ny ankizy madinika mipetraka eny an-kianja izay miantso ny namany, ka manao hoe: Nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo; nanao hira mampalahelo izahay, nefa tsy nandòn-tratra ianareo. Fa tonga i Joany, tsy nihinana tsy nisotro, nataon’ny olona hoe: Azon’ny demony izy. Tonga indray ny Zanak’Olona, mihinana sy misotro, lazain’ny olona hoe: Lehilahy lian-kanina io, sady mpisotro divay sy sakaizan’ny poblikanina mbamin’ny olon-dratsy fiaina rehetra. Fa efa nohamarinin’ny asany ny Fahendrena.”
Mihanta aminao izahay, ry Tompo, enga anie hampitony Anao ny vavaka aman-tolotra ataonay amim-panetren-tena, ary satria tsy azonay ianteherana ny soa mba vitanay, dia vonjeo fanampiana izahay noho ny hatsaram-ponao.
Avy nihinana ny hanim-panahy izahay, ry Tompo, ka mitalaho an-tanan-droa aminao, enga anie izahay nahazo anjara tamin’izany mistery izany mba hampianarinao hahay mandanjalanja ny zavatry ny tany araka ny hevitrao sy hifikitra amin’ny zavatry ny lanitra.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0322 s.] - Hanohana anay